Vaovao - Mifantoka amin'i Shina ireo marika manerantany
Mifantoka amin'i Shina ireo marika manerantany
Niorina tamin'ny 1985, China Cycling Association (CBA) dia fikambanana nasionalin'ny indostrian'ny bisikileta ao Shina, fikambanana sosialy tsy mitady tombom-barotra ary olona ara-dalàna. Izy io dia an-tsitrapo novolavolain'ny bisikileta, bisikileta elektrika sy ny orinasam-pamokarana momba azy, ary koa ny orinasam-pamokarana sy ny varotra mifandraika amin'izany, ny fikarohana siantifika, ny vondrona fampianarana ary ny fikambanana eo an-toerana. Ny mpikambana dia manana mpikambana eo amin'ny 500 eo ho eo ary ny volan'ny vokatra sy ny fanondranana isan-taona dia mitentina 80% amin'ny indostria manontolo.
Shina 2019 dia mahatratra 150.000 metatra toradroa ny velarantany, manintona orinasa 1 224 avy amin'ny firenena 26 sy ny faritra handray anjara amin'ny fampirantiana, miaraka amina tranoheva 6.365. Ankoatry ny fiara sy ny bisikileta, misy ihany koa ny faritra fampirantiana ho an'ny bisikileta elektrika, bisikileta zaza ary kojakoja bisikileta ivelany. Raha ampitahaina amin'ny taona 2018 dia misy ny fampirantiana vaovao avy any Failandy, Belzika, Repoblika Tseky, Mexico, Emira Arabo Mitambatra, Singapore, Thailand sy firenena hafa. Ireo matihanina amin'ny indostria avy amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 toa an'i Etazonia, Alemana, France, Italia, Netherlands, Japan, India, Korea atsimo ary Espana dia andrasana hitsidika azy. Ny fampirantiana any Chine dia nanjary iray amin'ireo lehibe indrindra fampirantiana bisikileta matihanina manerantany. Ao amin'ny toekarena manerantany ankehitriny izay misavoritaka, ny fampirantiana an'i Shina dia mbola misarika ny sain'ny olona avy amin'ny indostria, izay mampiseho fa tsy azo hozongozonina ny satan'ny sehatra fampirantiana any Chine! Satria marika avo lenta hiditra amin'ny tsena sinoa hizaha toetra ny rano sy ireo mpitsidika matihanina vahiny mitady Ny mpiara-miombon'antoka sinoa amin'ny safidy voalohany, ny fampirantiana China dia misokatra handray ireo mpitsidika manerana an'izao tontolo izao hanatrika ny fampirantiana sy ny fifampiraharahana.
Ireo mpanamboatra, marika ary mpaninjara avy any ivelany dia mahita an'i Shina ho loharanom-pahalalana ho an'ny vokariny, tsena lehibe ho azy ireo, ary toha-pambolena. Nahavita zava-bita lehibe teto izy ireo. Ary ny fampirantiana an'i Shina dia nanjary dingana tsara indrindra hanatanterahan'izy ireo ny nofinofin'izy ireo. Ny fandehanana any Chine, fampirantiana any Shina, ary ny fandehanana any amin'ireo toerana ahitan'izy ireo tsara ny filamatra napetrak'izy ireo dia nilaina tamin'ireto mpampiasa vola vahiny ireto. isan-taona.
Bisikileta fandanjalanjana mavokely, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta / bisikileta 20 santimetatra, Bisikileta, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta fandanjana ankizy,